Mpanamboatra sy mpamatsy lamba fampidirana hafanana - fonosana ziling
Taratry ny tombo-kase Ventsitra
Hafanana roa sosona roa ...
Induction hafanana iray ...
Tapakila fanindronana hafanana iray miaraka amin'ny lamosina
Taratasy fanamafisana induction hafanana iray miaraka amin'ny sombin-javatra PE anatiny
Taratry ny tombo-kase fampidirana hafanana roa misy "firafitra"
Ity liner ity dia vita amin'ny sosona aluminium foil sy sosona backup. Mila ny milina fanidiana induction izy io. Aorian'ny masinina fampidirana dia manome laminate misy tombo-kase mihidy hermetika amin'ny molotry ny fitoeram-bokatra, ny sosona aluminium dia voahidy amin'ny molotry ny kaontenera ary ny sosona faharoa (baoritra endrika) tavela ao anaty satrony. Ny liner faharoa ho toy ny liner reseal dia tavela ao anaty satroka aorian'ny fizotry ny hafanana.
Tapa-kofehy fampidirana hafanana roa miaraka amin'ny sosona taratasy
Taratasy famehezana induction hafanana iray miaraka amin'ny sarimihetsika PE fotsy
Asandrato 'N' Peel Aluminium Foil Induction Seal Liner
Ity dia singa iray fanamafisam-peo fanamafisam-peo iray, tsy misy sosona backup na faharoa, azo fehezina amin'ny fitoeran-drano amin'ny alàlan'ny masinina induction na vy elektrika mivantana. Izy io dia afaka manome tombo-kase henjana amin'ny plastika na kaontenera fitaratra azo esorina amin'ilay sombin-javatra iray manontolo, ary tsy misy ambina eo amin'ny molotry ny kaontenera. Ity kiran-tsolika induction ity dia mora sokafana miaraka amin'ny fiasan'ny peel 'N'.